Teny : Famokarana Sarimihetsika Amin’ny Teny Afrikàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2018 5:18 GMT
(Amin'ny teny anglisy ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra)
Fomba iray mahomby ho fitahirizana ireo teny sy hisorohana ny fanjavonany tanteraka ny fampiroboroboana ny famokarana sarimihetsika amin'ny teny afrikàna. Natao ny 2 hatramin'ny 5 Oktobra 2010 tao Akure, Nizerià ny andiany faha-5 amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika amin'ny Teny Afrikàna. Maherin'ny telonjato ireo mpanatontosa, mpiantsehatra, mpanoratra tantara, tompona petrabola sy olon'ny indostrian'ny sarimihetsika tonga nandray anjara tao. Rtoa Biodun Ibitola, talen'ilay fetibe, no naneho izao hevitra izao:
Ny famoronana sarimihetsika amin'ny teny afrikàna dia hanetsika indray ireny teny ireny, handrindra azy, hamerina azy ireny sy hisoroka ny fanjavonany, hahafahana ihany koa mitrandraka ny famadihana azy ho azo ampidirina anaty solosaina, ny fandrafetana tahirinkevitra momba azy ireny sy ny sehatra fifandraisana azony iasàna. Ny famokarana sarimihetsika amin'ny fiteny afrikàna dia hanampy ireo Afrikàna any ampielezana mba hifamatorany indray amin'ireo fototra niaviany sy hanasongadinana ireo loharanon-karenan'i Afrika amin'ny resaka fizahantany.
Pikantsary avy amin'ny tranonkala FIAF 2011
Ho an'ny governora Olusegun Mimiko, izay nanokatra ilay fetibe : “Tsy ho azo tanterahana ny hanorina ny fandrosoantsika ara-tsosialy raha toa izy tsy mifàka ao anatin'ny kolontsaintsika”.
Ny profesora Wole Ogundele, tele jeneralin'ny Ivontoerana ho an'ny Kolontsaina sy ny Fifanarahana Iraisampirenena tao Osogbo, ao amin'ny fanjakan'i Osun kosa nanao ity fanamarihana manaraka ity:
Marobe ireo teny afrikàna, isan'izany ny Yoruba izay ampiasain'ireo olona an-tapitrisa manamorona ny morontsiraka andrefan'i Afrika, no efa tandindonin-doza sy atahorana hiharan'ny fanjavonana sahady. Raha toa ka ny sarimihetsika amin'ny teny afrikàna no afaka mamonjy ny tenintsika tsy ho tratry ny loza mahatsiravin'ny fanjavonana tanteraka, dia izay izany, tsaratsara kokoa ho antsika ny miarahaba azy ireny fa tsy ny mamendrofendro ireo mpanatontosa.
Pikantsarin'ny pejy voalohany tamin'ny lahatsary iray amin'ny teny afrikàna
Harris Chuma, filohan'ny Igbo Film Forum (IFF, Forum du Film Igbo), fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana manokan-tena amin'ny fanomezana aina vao ny sarimihetsika amin'ny fiteny Igbo – izay ivon'ny famokarana tao amin'ny Nollywood nandritra ny fotoana vitsivitsy – no manazava ao anaty tafatafa iray :
Taona vitsivitsy lasa izay, tonga saina aho hoe ilaintsika ny miantoka ny fisiantsika eo anivon'ireo mpanatontosa sarimihetsika amin'ny teny afrikàna. Izay nanosika ny firotsahako an-tsehatra, dia ny fahitàna fa nanjavona teny amin'ny fàfantsika sy tany anaty efitrano fandefasana sarimihetsika ny teny Igbo. Raiso ny ankamaroan'ireo fantsona mpandefa amin'ny alàlan'ny hosona : misy ny fantsona amin'ny fiteny Hausa sy Yoruba fa na iray aza tsy misy amin'ny teny Igbo, kanefa dia Igbo ireo mpanatontosa mamatsy vola ny ankamaroan'ireo sarimihetsika vokarina amin'izao fotoana izao ao Nizerià. Ny firotsahako an-tsehatra dia teraka avy amin'ny faniriana lalina hampihaino sarimihetsika mampiasa ny teny Igbo.
Ny sisa andrasana dia ny hahita izay fomba fandraisana ireny sarimihetsika amin'ny teny afrikàna ireny eny amin'ireo vavahadin-tseraseran'ireo mediam-bahaka toy ny YouTube, Vimeo, sns. ary eny amin'ireo tranonkala ara-barotra na misahana amin'ny ampahany fotsiny ny ara-barotra toy ny AfricaFilms.tv sy AFNEX,.ankoatra ireo hafa. Ireo fitaovana famokarana haino vaky jery toy ny lahatsary alaina amin'ny telefona finday ohatra dia afaka araraotina mba hamokarana sy hanapariahana sarimihetsika vokatra eo an-toerana, amin'ny sandy mora. Inty misy sarimihetsika fohy amin'ny fiteny Twi hita tao amin'ny YouTube : The Volcano (Ilay volkano), nalefan'ny Scenarios Africa.